Isi nnyocha Lactoferrin
Lactoferrin (LF) bụ protein sitere n'okike nke dị na mmiri ara ehi mammali ma na-egosipụta akụrụngba mgbochi microbial. Kemgbe mmalite ya na 60s, enweela ọtụtụ ọmụmụ iji gosipụta uru ọgwụgwọ glycoprotein na ọrụ ya na ọgụ.
Agbanyeghi na umuaka nwere ike inweta ihe ndi ozo site n’inye ndi nne ha, lactoferrin uhere mepere emepe n’adiri ahia diri otutu oge.
Phcoker is a professional manufacturer to produce lactoferrin powder
1. Gịnị bụ Lactoferrin?
Lactoferrin (146897-68-9) bụ glycoprotein a na-ejikọ ọnụ nke ndị ezinụlọ Transferrin. Protein a bara ụba na mgbochi ma ọ dị na mmiri ara ehi ma nke ehi. E wezuga ya, ọ bụ mpụta nke ihe nzuzo dị iche iche dị ka anya mmiri, mmiri, imi mmiri, ihe ọ pancụ biụ na-egbu egbu, na ọnya. Ahụ ga -ewepụta onwe glycoprotein na nzaghachi nke mkpali mkpali.
Tupu ị nwee ike lactoferrin zụta, were akwukwo site na nkọwa a ka ị mara ma ihe mgbakwunye a kwesịrị ya.
Otutu lactoferrin dị na colostrum, nke bụ mmiri mmiri na-adọrọ adọrọ mbụ amịpụtara mgbe amuchara nwa. A na-ezo ya n’ime mmiri ara ehi n’ime ụbọchị abụọ mbụ ma ọ bụ atọ mbụ nke ịmụ nwa. Agbanyeghi na nzuzo nke colostrum na-abia nso, nnukwu lactoferrin ka ga-adi ma obu na mmiri aragharia.
Yabụ, kedu ka ị si ewepụta lactoferrin na colostrum bovine?
Kwe ka m duzie gị n'ụzọ kwụ ọtọ ị ga - ekewa lactoferrin.
Nzọụkwụ mbụ na-agụnye ikewapụ whey na mmiri ara ehi. Whey bụ mmiri mmiri na-amịpụta ma ọ bụ mmiri ara ehi na - ete. Usoro nkewapu onwe ya jiri chromatography na mmekorita hydrophobic na chromatography nke ion na-esochi site na ntinye ohuru na uzo nnu.
Bovine colostrum sitere na ehi. O juputara na protein, ogwu, mineral, vitamin, carbohydrates na abuba. Usoro ndị a egosiputa uru ọgwụgwọ nke colostrum, yabụ, na-adọta mmasị n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị nyocha na ngalaba ahụike.
Nyere na ọdịnaya nke lactoferrin na-ebelata ka oge a na-amụba amụba, a na-atụ aro nwa ọhụrụ ahụ. Were, dịka ọmụmaatụ, ọgwụ LF na-ahụkarị ozugbo amụrụ nwa bụ ihe dịka 7-14mg / ml. agbanyeghị, ịta ahụ nwere ike wedata ihe dị ka 1mg / ml na mmiri ara ehi tozuru oke
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụgharị na lactoferrin immunological, ị kwesịrị ị na-etinye ego na bovine colostrum supplementation.
Azụmaahịa mere lactoferrin nnukwu ntụ ntụ bụ ngwaahịa nke bovine colostrum. Agbanyeghị, ngwa ahịa a enyela ụfọdụ ndị nsogbu nsogbu maka ọrịa ara ehi na-ewe ha. Ka m mesie gị obi ike na ọnọdụ a adịkarịghị ụkọ. E wezụga nke ahụ, ụfọdụ mgbakwunye ụmụ lactoferrin bụ mkpụrụ nke osikapa na-arụ ọrụ mkpụrụ ndụ, na-akwado ndị na-anaghị anabata lactose.
2. Kedu ihe kpatara eji eji Lactoferrin ntụ dị ka ihe mgbakwunye, Uru Lactoferrin bara?
Cutibacterium na propionibacterium bụ maka ọtụtụ ihe otutu. Lactoferrin na - ewepu nje bacteria ndị a ma belata mmetụta ha.
N'ọnọdụ ụfọdụ, usoro radieshon na mkpụrụ ndụ oxygen na-emeghachi omume na-enye mmerụ ahụ nke mkpụrụ ndụ na mbibi DNA. N'ihi nrụgide oxidative, mbufụt nwere ike ịdata na mmetụta nke uto nke ihe otutu. Dabere na ndị ọkà mmụta sayensị na-eme nchọpụta, lactoferrin bụ ihe nwere ike egbochi oxidant, yabụ, ike nke ịlụ ọgụ maka radicals n'efu.
Iwere lactoferrin tinyere vitamin E na zinc ga –ebelata ogwugwo oria na comedones ihe dika onwa ato.
E wezụga nke ahụ, mbufụt na-ebute ọnya ọgbụgba na cysts ozugbo site na imechi pares. Ngwongwo ihe mgbochi nke lactoferrin na-ekwe nkwa ọgwụgwọ nke ọnya na ngwa ngwa.
Ndi n ’okacha mmuta mere ka ekwuputa n’ezie na aru ike gita bu aru gi. Iji maa atụ, ọ bụrụ na eriri afọ gị na-adị iberiibe ma ọ bụ na-adịghị mma, na-eji ụdị ntutu ihu niile ma ọ bụ probiotics nke ụwa agaghị edozi ọnya akpụkpọ ahụ, egwuregwu, ma ọ bụ eczema. Iwere lactoferrin ga-ewepu ụmụ nje na - emerụ ahụ na ngịga ma na-akwalite ọrụ nke Bifidus flora.
Ewezuga ịgwọ ọnya, lactoferrin belatara ihe mgbaàmà nke psoriasis ma mee ka ọ gbakee site n’ọrịa ọnya akwara ozi, bụ nke jupụtara n’etiti ndị ọrịa nwere ọrịa shuga.
Onye nnọchi anya nke microbial
Ọtụtụ ọmụmụ na-akwado na Lactoferrin (LN) na-egbochi nje, nje, nje, na ọrịa fungal ịwakpo ahụ. onyinye ahụ na-arụ ọrụ site na ijikọta na ụmụ nje ndị a, na-agbagha usoro sel ha, ma na-egbochi ndị nabatara cellular.
N'otu nnyocha, ndị sayensị chọpụtara na lactotransferrin (LTF) Nyocha dị mma karịa igbochi nje herpes karịa nke mmadụ. Na nyocha nke vitro na-egosikwa na mgbakwunye a na-achịkwa mmetụta nke HIV.
Na ubé elu doses, lactoferrin ọrụ jikwaa virulence nke patba ọcha n'anya C. Dị ka Nchoputa Hepatology, ọgwụgwọ a na-eme ka ngosipụta nke interleukin-18 pụta, protein na-eme ka ọ daa ọrịa nje Hepatitis C. Maka ịrụ ọrụ kachasị arụ, ndị ọrịa kwesịrị ị takeụ ihe dị ka gram 1.8 ruo 3.6 kwa ụbọchị. Ihe kpatara ya bu na obere lactoferrin ga-eme ka enweghi ihe di n’ime ihe a na-ahu anya.
Enwere ịkọ nkọ, nke na-atụle LF dị ka ọgwụgwọ maka ọrịa helikobacter pylori. Mgbe ị na-atụkọta mgbakwunye ahụ na ọgwụgwọ ọnya gị, ọ ga-abụ na ọgwụ ndị ahụ ga-arụ ọrụ. Nkwupụta a bụ esemokwu ọkpụkpụ n'etiti ndị na-eme nchọpụta n'ihi na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ kwenyere na ntụpọ lactoferrin ga-abụ ihe na-abaghị uru na enweghị ọgwụ ndenye ọgwụ.
Usoro nke Metabolism Iron
Lactoferrin ọ bụghị nanị na-edozi oke nke iron n'ime ahụ kamakwa ọ ga-eme ka mmụba ya dịkwuo elu.
Enweela ọmụmụ ihe na - aga n'ihu nyocha nke chọrọ iji atụnyere arụmọrụ nke LF megide ọgwụ na - eme ka ikuku na - adịghị mma n'oge ana - amụ nwa. Site na nnwale ahụ, lactoferrin gosipụtara ike karịa n'ịgbapụta nguzobe haemoglobin na mkpụrụ ndụ ọbara uhie.
Womenmụ nwanyị na-eri glycoprotein nwere ogo iron kachasị mma yana nsonaazụ efu. Ọrụ Lactoferrin na-ebelata ohere ọpụpụ ọpụpụ, ịmụ nwa, na obere ọmụmụ ịmụ nwa.
Ya mere, o doro anya na ọ bụ ezigbo mgbakwunye maka nne dị ime na ụmụ nwanyị toro afọ ịmụ nwa na-efunahụ ụfọdụ iron mgbe ha nọ n’agha. Ndị anaghị eri anụ na ndị na-enye ọbara ọbara ugboro ugboro nwekwara ike irite uru site na nri lactoferrin.
Ahụike Ọrịa Gastrointestinal Tract
Mgbakwunye nwa Lactoferrin na-edozi ma na-edozi ahụ ike. Ọ na-ewepụ nje bacteria na-emerụ ahụ, nke na-akpata mbufụt. Dị ka ihe atụ, ụmụ nje ndị a na-akpata ihe ka ọtụtụ n’ọnwụ n’eriri afọ na enterocolitis, bụ́ nke na-emebi mgbidi eriri afọ nke na-eduga n’ọnwụ ọnwụ. Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara ya, nwa gị anaghị ara ara, a na-atụ aro ka ị gbanwee gaa bovine lactotransferrin (LTF).
3. Uru Baratoferrin nyere nwa ahụ
Lactoferrin na-agbakwunye nwa na-egbochi uto nke ụmụ irighiri ihe na eriri afọ nke ụmụ amụrụ ọhụrụ. Microbes ndị a gụnyere Escherichia coli, Bacillus stearothermophilus, Staphylococcus Albus, Candida albicans, na Pseudomonas aeruginosa. Ọtụtụ nnyocha na-akwado eziokwu ahụ bụ na oriri mgbatị lactoferrin kwa ụbọchị na-ebelata ohere nke ọrịa gastroenteritis noroviral na ụmụ ọhụrụ.
N’agba aka, LF na - akwalite mmụba nke mkpụrụ ndụ endothelial ebe ha na - ekwupụta uto nke ihe dị na akwara lymphatic. Ya mere, ọ bịara pụta ìhè na ịgbakwunye lactoferrin nwere ike ịbụ ndenye ọgwụ maka imi afọ mebiri emebi.
Ụ nwa bụ isi ihe eji eme ka ụmụ nwoke ghara ịonụ. Agbanyeghị, ndị dọkịta na-awa ahụ na-atụ aro na ịgbakwunye mgbakwunye ígwè dị mkpa ebe ọ bụ na mmiri ara nwere obere nke mineral.
Kwe ka m kọwaa ihe kpatara LF ji bụrụ ezigbo mgbakwunye maka ụmụ amụrụ tupu ha amụọ nwa na ụmụ amụrụ obere amụrụ obere ọmụmụ. Ọtụtụ mgbe, otu a nwere ike ịrịa ọrịa anaemia nke iron. Ijikwa lactoferrin mgbakwunye ụmụ ọhụrụ ga-eme ka haemoglobin na mkpụrụ ndụ ọbara uhie dị na sistemụ ụmụaka. Ọzọkwa, ọmụmụ ihe na-ekpughe na ntinye nke ígwè na-eme ka mmepe nwa na-emetụta nwa ọhụrụ.
N'oge ụfọdụ, nje na-emerụ ahụ dịka E.coli na-eri nri na iron dị na akwara afọ. La were lactoferrin ga-anapụ ụmụ nje nke iron ma mebie ya ebe ị na-ahụ na onye nnabata ahụ na-enweta mineral niile dị.
LF na-arụ ọrụ dị egwu na mmepe nke sistem nke nwa. Usesfọdụ n'ime iji ọgwụ lactoferrin ntụ ntụ gụnyere mmụba nke ọrụ macrophages, immunoglobulins, mkpụrụ ndụ NK, na T lymphocytes, bụ ndị na-ahụ maka ọgụ mgbochi ọhụhụ. Kedu ihe ọzọ, ijikwa LF na-ebelata ohere ịza ahụhụ.
4. Kedu ka Lactoferrin si melite sistemụ ịlụ ọgụ?
Media n'etiti Ada Ada na Innate Immune Function
Maka azịza nke ebumpụta ụwa, lactoferrin na-eme ọtụtụ ụzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-eme ka mkpụrụ ndụ nke sel ihe na-egbu egbu dị mma (NK) na neutrophils. Protein ahụ na-akwalite phagocytosis ma na-akpata mmụba nke macrophages.
Maka nzaghachi na-agbanwe agbanwe, LF na-enyere aka na mgbakwunye nke mkpụrụ ndụ T-sel na B-mkpụrụ ndụ. N'ihe banyere mgbaàmà mkpali, ọrụ ebumpụta ụwa na ọrụ mmegharị ahụ ga-ejikọ ọnụ iji merie ihe omume.
Lactoferrin na - achịkwa mmepụta nke cytokines pro-inflammatory na interleukin 12, nke na-egosipụta ihe nchebe iji gbochie ọrịa nje intracellular.
Ndị ọka iwu na Sistem Ọrịa Mmeme Ahụ (SIRS)
Ọrụ nke ntụ ntụ lactoferrin n'ibelata ụdị oxygen (ROS) na - emeghachi omume abụrụla ihe dị mkpa n'ịmụta ihe metụtara mmekọ ya na mmepe kansa. Mmụba na ROS na-atụgharị gaa n'ihe egwu dị elu nke ọnọdụ mkpali n'ihi apoptosis ma ọ bụ mmerụ ahụ.
Ọgụ A Na-emegide Microorganisms
Ngwongwo mgbochi nke microbial nke lactoferrin belata oria, nje, nje, na oria fungal.
Besmụ nje na-eme nke ọma ma dabere na ígwè maka uto na nlanarị. Mgbe ha wakporo onye nnabata ahụ, LF na-egbochi ikike ha nwere iji ígwè rụọ ọrụ ha.
N'oge mmalite nke ọrịa, lactoferrin (LF) na-eme iji gbochie nsogbu ndị mba ọzọ n'ụzọ abụọ doro anya. Protein ahụ ga - egbochi ndị nabatara cellular ma ọ bụ jikọta ya na nje ahụ, ya mere, na - egbochi ịbanye na onye ọbịa ahụ. Omume ndị ọzọ na-egbochi microbial nke lactoferrin gụnyere ịgbagha ụzọ sel nke nje ma ọ bụ igbochi metabolism ha.
Ọtụtụ ọmụmụ na-akwado lactoferrin ntụ ntụ na-eji na njikwa nke nje Herpes, nje HIV, ịba ọcha n'anya mmadụ C na B, influenza, na hantavirus. E wezụga nke ahụ, mgbakwunye ahụ gbochiri mgbasa nke alphavirus, rotavirus, papillomavirus mmadụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ọnọdụ ụfọdụ, Lactoferrin nwere ike ọ gaghị ewepụ ọrịa niile mana ị nwere ike ijide n'aka na ọ ga-ebelata ogo nke ibu nje dị ugbu a. N'ime ihe ọmụmụ ndị gara aga, LF dị irè na-egbochi SARS pseudovirus. Ebe ọ bụ na SARS-CoV-2 dara n'otu klas dị ka SARS-CoV, enwere ike na lactoferrin nwere ike belata nhụsianya nke COVID-19.
Ọ bụ ezie na ọgwụ ndị metụtara ọgwụ na-ekwusi ike na ịkwalite ọrụ ọgụ gị anaghị echebe mmadụ pụọ na coronavirus, ịgbakwunye lactoferrin ga-enyere aka n'ọgụ ahụ. E kwuwerị, otu ndị ọrụ ahụ achọpụtala na ndị agadi na ndị nwere obere ọrịa nwere nnukwu ihe ize ndụ nke ibute COVID-19.
5. Lactoferrin ntụ ntụ na-eji na Ngwa
Lactoferrin ntụ ntụ dị maka ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkà mmụta chọrọ ịchọpụta oke ọgwụ ya n'ahụ ahụ mmadụ. Ọ nwere atụmanya sara mbara na mgbochi ọrịa, nri ndị na-edozi ahụ, nri na ọgwụ ọgwụ, na ịchọ mma.
Maka nyocha gị na nyocha nyocha, hụ na ị ga-esi nweta onyinye ahụ site na ndị na-eweta lactoferrin ntụ ntụ dị mma.
Lactoferrin uzuzu were na mmiri ara ehi ntụ
Powdermụaka ntụ ntụ na-aga n’ihu n’ihu na-atụgharị uche na mmiri ọgwụ nke ezigbo mmiri ara ara nne. Lactoferrin bụ protein nke kacha baa ụba na mmiri ara nne ya. Ọ na-ewu ewu maka iweta ụdị uru dị iche iche nwa ahụ gụnyere gụnyere ígwè maka mgbochi, igbochi kansa, na ịkwalite ọkpụkpụ ahụike n'etiti ndị ọzọ.
Lactoferrin bụ akụkụ nke ukwuu nke mmiri ara nne ya nke a maara dị ka colostrum. Colostrum nwere ihe dị ka okpukpu abụọ karịa kwa mililita dị ka mmiri ara ara tozuru etozu. Nke a bụ ịkọwa na ụmụaka nke ọdụdụ ụmụaka chọrọ nrịba elu nke lactoferrin maka mmepe kachasị mma.
Mmelite n'ime usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ nke nwa ọhụrụ na-akwado akụkụ Lactoferrin n'ụdị nwa ọhụrụ. Mkpụrụ protein ahụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa na usoro mgbochi nke nwa ọhụrụ ma na-anọchite anya usoro mgbochi mgbochi nje na mgbochi microbial. Isi ihe mgbochi microbial na-ebutekarị banyere iron-ions chelation, nke dị oke mkpa maka uto nke nje. E wezụga nke ahụ, a kwenyere na lactoferrin na-arụ ọrụ dị ka antioxidant nke nwere ike iwusi mmeghachi omume ahụ ike site na ime ka ọdịiche dị, mmụba, na ịmalite nke sel ndị na-alụ ọgụ.
6. Mmetụta Lactoferrin
Nchedo nke LF pivots na ihe ole na ole.
Nnukwu ogwu Lactoferrin nwere ike ịbụ abụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ihe mgbakwunye bụ ihe na-emepụta mmiri ara ehi, ị nwere ike iji obi ike rie ya n'ọtụtụ buru ibu maka otu afọ. Agbanyeghị, mgbe ngwaahịa a sitere na osikapa, ohere ya bụ na ị overụbiga mmanya ókè n'izu abụọ ga-ebute ụfọdụ nsogbu na-adịghị mma.
Ahụkarị lactotransferrin (LTF) mmetụta gụnyere;
Akpụkpọ ahụ akpụkpọ
N'adịghị ka ọtụtụ ọgwụ, ọgwụ lactoferrin adịghị mma maka ndị na-atụ anya na ndị nne na-enye nwa ara.
Zọfere nsonaazụ lactoferrin, a na-atụ aro usoro onunu ogwu n'etiti 200mg ruo 400mg. You ga-ewere ya maka ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ na-aga n’ihu. N'ọnọdụ ndị a na-adịghị ahụkebe, oge ahụ nwere ike iru ọnwa isii.
7. Onye nwere ike irite uru na Lactoferrin?
Lactoferrin baara nne na nwa ahụ uru.
N'ime oge mmeme, inye ihe mmezi a ga-enwe ọmarịcha ogo etu nwa ebu n’afọ na ogo ịmụ ya. Ọ bụrụ na nne gara n’ihu ị withụ lactoferrin n’oge a na-enye nwa ahụ, mmiri ara ya ga-aka nke ọma. Ọzọkwa, nwa ahụ ga-anya isi na agba na -eme ahụ ahụ dị mma.
Antsmụ ọhụrụ na ụmụ na-enweghị ara
Ihe mgbakwunye lactoferrin na-ahụ na nwa ọhụrụ tolitere sistemụ dị ike ma na-echebe ọnya afọ dị ala pụọ ​​na allergens. Na mgbakwunye, mgbakwunye ahụ na-arụ ọrụ dị ka ọgwụ mgbu, na-enyere aka na bowel nke mbụ nwa ọhụrụ. Usoro umu aka ndi bara ụba na agba na-enweta site n'aka ndi na-enye ubochi ure obodo obodo na nke ntaneti.
Lactoferrin na-emewanye ogo nke hemoglobin, mkpụrụ ndụ ọbara uhie, na ferritin. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ na-eji sulfate dị egwu iji gbochie ụkọ iron, ọtụtụ nnyocha nyocha na-akwado na lactoferrin dị ike karị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye anaghị eri anụ ma ọ bụ onye na-enyekarị ọbara, ị ga-achọ nri bara ọgaranya iji mejuo ogo hemoglobin na ferritin dị ala. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ịzụta ezigbo lactoferrin zụta n'aka ndị na-ere ahịa n'ịntanetị.
Ndị mmadụ na-anaghị enwe ọunityụ
Lactoferrin na-agbachitere ahụ pụọ n'ọrịa ndị na-efe efe site na imechi ụmụ nje na-efe efe na igbochi mmụba nke nje na nje. Ngwakọta ahụ na-arụsi ọrụ ike na modu nke ụzọ mgbaàmà nke ọrụ maka ileba anya na azịza mgbochi nke onye ọbịa.
Lactoferrin na-arụ ọrụ dị ka onye ogbugbo, na-egbochi ma na-ahazi mmekọrịta dị n'etiti ọrụ nkwụghachi na ebumnuche ebumpụta ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ na-eme ka ọrụ phagocytic dịkwuo elu site na mbuli nke neutrophils na macrophages. Maka usoro e ji alụso ọrịa ọgụ, ihe a na - eme ka mkpụrụ ndụ T na sel (B) na - eto eto, na- ekwuputa ihe mgbochi sel na oke mkpali.
Dị ka lactoferrin, IgG ma ọ bụ immunoglobulin G bụ protein na-egbochi microbial dị na mmiri ara ara.
Enwere otutu nnyocha iji kọwaa njikọ dị n'etiti lactoferrin na IgG.
Ntinye lactoferrin na colostrum dị elu karịa nke IgG. Dabere na ndị ọkà mmụta sayensị na-eme nchọpụta, ọtụtụ ihe na-emetụta ọnụọgụ protein ndị a na mmiri ara ehi.
Dịka ọmụmaatụ, lactoferrin na IgG na-enwe mmetụta na-ekpo ọkụ ma na-ere ya. Immunoglobulin G nwere ike iguzogide ọgwụgwọ okpomoku ruru 100 Celsius ma mana naanị sekọnd ole na ole. N'aka nke ọzọ, lactoferrin ji nwayọ belata site na mmụba okpomọkụ ruo mgbe ọ ghasịrị kpamkpam na 100 Celsius.
Asingdabere n'isi ihe ndị a, ị ga-achọpụtala na oge na ikpo ọkụ bụ ihe kachasị mkpa mgbe ị na-edozi mmiri ara ehi. Ebe ọ bụ na mmiri ara ehi ịracha mmiri ara ehi abụrụla mgbagha, ọtụtụ mmadụ na-ekpebi ịkpọ nkụ.
Ịta nke Lactoferrin (146897-68-9) nọ n'ọnụ ọgụgụ ya mgbe ọ mụsịrị nwa. Ka oge ọmụmụ ya na-abawanye, protein a na - eji nwayọ belata, ikekwe ọ bụ n'ihi mbelata agba. N’aka nke ọzọ, ọdịda nke ọkwa nke immunoglobulin G fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-eleghara oge niile a na-enye nwa ara.
Agbanyeghị na lactoferrin dị ukwuu na-ada na mmiri ara ehi mammali, itinye uche ya ka ga-adị elu karịa nke IgG. Eziokwu a ka bụ ma ọ bụrụ na agba, na mgbanwe, ma ọ bụ na mmiri ara ehi tozuru oke.
Yamauchi, K., et al. (2006). Bovine Lactoferrin: Uru na usoro dị iche iche nke Imegide Ọrịa. Ihe omumu ihe banyere ndu na ndu.
Jeffrey, KA, et al. (2009). Lactoferrin dika onye Modulator nke di ndu. Ihe eji emepụta ọgwụ ugbu a.
Lepanto, MS, et al. (2018). Nrụpụta nke Nchịkwa Ọrịa Lactoferrin n'ọgwụgwọ Ọrịa Ọbara na Ọbara nke Mgbu Na gmụ nwanyị Dị Ọrịa na Ndị Na-amụghị Ime: Ọmụmụ Ihe Mgbakwunye. Frontiers na Immunology.
Goldsmith, SJ, et al. (1982). IgA, IgG, IgM na Lactoferrin ọdịnaya nke Mmiri ara ehi mmadụ n’oge ọgbụgba mbido na nsonaazụ nke nhazi na nchekwa. Journal nke Nchedo Nri
Smith, KL, Conrad, HR, na Porter, RM (1971). Lactoferrin na IgG Immunoglobulins sitere na gland Mamiary Involuted. Journal nke Science Science.
Sanchez, L., Calvo, M., na Brock, JH (1992). Ọrụ ndu nke Lactoferrin. Ebe a na-edebe ihe ochie nke ọrịa na nwata.
Niaz, B., et al. (2019). Lactoferrin (LF): Ihe Nkịtị Na-emegide Mpempe microbial. International Journal of Njirimara Nri.